संक्रमणबाट जोगिन दुध र बेसारको मिश्रण उपयोगी « Bagmati Online
प्राय: गानो गएर पेट दुखेको बेलामा घरेलु उपचारको रुपमा हामीलाई परिवारका पाका सदस्यहरूले दुध वा दहीमा बेसार मिसाएर खान सुझाव दिन्छन् । यसले गानोको मात्रै नभएर यस्तै विभिन्न रोगहरुलाई निको पार्छ भन्ने कुरा चिकित्सकहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । तर, कसरी ? वास्तवमा दुधमा बेसार हालेर खाँदा पौष्टिक मूल्य र औषधीय गुणहरू यसमा पर्याप्त पाइन्छ । यस्तो औषधीय गुणका कारण हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने गर्छ । यस बाहेक पनि संक्रमणको कारण बढ्दो रोगहरूको जोखिमलाई क मगर्न पनि यो घरेलु उपचार अति प्रभावकारी हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यो पनि भनिएको छ कि दुधमा एक चम्मा बेसार मिसाएर नियमित खाँदा हामी संक्रमणबाट जोगिन सक्छौं । दुध र बेसारको नियमित प्रयोग गरी कसरी संक्रमणबाट बच्ने त ?
रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउन के गर्ने ?
बेसार र दुधको मिश्रणलाई नियमित पिउँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन यसले मद्दत गर्छ । वास्तवमा, जब बेसार र दुध एकसाथ मिसिन्छन् । यसको मिश्रणले एन्टिभाइरल, एन्टिब्याक्टेरिया र एन्टिफंगल एजेन्टहरुको रूपमा कार्य गर्दछ । त्यसपछि जब हामी यसलाई उपभोग गर्छाैं । यी विशेष गुणहरूका कारणले यसले शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने गर्छ । यसले हामीलाई धेरै प्रकारका संक्रामक रोगहरूबाट बचाउँछ ।
घरमै कसरी तयार पार्ने यो औषधि ? आवश्यक सामग्रीहरु
एक गिलास दूध,सानो चम्चाको एक चम्चा बेसार,ग्यास,दुध तताउने भाँडा
सबैभन्दा पहिले उमालेको दुधलाई ग्यास वा इन्डक्सनमा राख्नुपर्छ । जब दूध उम्लिन सुरू हुन्छ त्यसपछि यसमा एक चम्चा बेसार थप्नुपर्छ । यस मिश्रणलाई करिब ५ मिनेटसम्म उमाल्नुपर्छ । अब यसलाई हटाऔं र यसलाई चिसो हुन दिऔं । त्यसपछि यसलाई उपभोग गर्न सकिन्छ ।
दुध र बेसारले अधिक लाभहरू प्राप्त गर्दछ
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको साथ बेसार र दुध पिउँदा जोडको दुखाईं वा चोटपटक आदिमा ठूलो राहत मिल्छ । एकै साथ यसले हाम्रोको पाचन प्रणाली सुधार गर्न समेत धेरै मद्दत गर्छ । यस बाहेक बेसारमा रहेको एन्टीक्यान्सर गुणहरूले पनि हामीलाई क्यान्सरको जोखिमबाट जोगाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले यो कोरोनाको संक्रमण फैलिएको बर्तमान समयमा समेत निकै प्रभावकारी रहेको मान्ने गरिन्छ ।
दुध र बेसारका अरु फाइदाहरु
कलेजको बिषाक्त पदार्थ हटाउँछ : दुधमा बेसार मिसाएर पिउँदा त्यसले प्राकृतिक तरिकाले कलेजोको बिषाक्त पदार्थ निकाल्छ । यसैले गर्दा रगत शुद्धीकरणमा पनि मद्दत गर्छ ।
पाचन यन्त्र चुस्त राख्छ : दुधमा बेसार मिसाएर पिउँदा पाचन प्रणाली चुस्त रहन्छ । तर, धेरै फ्याट भएको दुध सजिलै पच्दैन ।
हड्डी बलियो बनाउँछ : बेसार र दुधको मिश्रणमा क्याल्सियम बढी हुन्छ । दैनिक यस्तो दुध पिउनाले हड्डी बलियो बनाउँछ ।
क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता : बेसारमा करक्यूमिन रहेको हुन्छ । यसले क्यान्सरको कोसिका रोक्ने क्षमता राख्छ । त्यसैले दुध र बेसार पिउदा क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता पनि बढ्छ ।
राम्रो निन्द्रा लाग्छ : यदि तपाईलाई अनिन्द्राको समस्या छ भने बेसार र दुध पिउनु लाभदायक हुन्छ । बेसार मिसाइएको दुधमा ट्रायटोफन हुन्छ, जसले राम्ररी निन्द्रा लगाउँछ ।
#दुध र बेसारको मिश्रण
अमेरिकामा एक व्यक्तिमा सुंगुरको मृगौला प्रत्यारोपण गरियो